Shiinaha ICE Nidaamka Osmosis-ka Dib-u-Celinta ee Qaboojinta Nidaamka Biyaha ee Soosaaraha iyo Soo-saaraha | Yubing
Waa maxay Reverse Osmosis?
Biyaha ka gudba xuubka RO waxaa loo yaqaan "permeate" iyo cusbada milmay ee xuubka RO diidey waxaa loo yaqaan "urursanaan". Nidaamka RO ee sida saxda ah u socda ayaa ka saari kara ilaa 99.5% cusbada soo galaya iyo nijaasta.
Warshadaha Dib-u-Celinta Osmosis RO Nidaamka Daaweynta Biyaha
Warshadda osmosis-ka ee wershadaha ayaa waxaa ka mid ah shaandhada horay loo sii mariyey ee loo yaqaan 'multimedia pre-filter, water softener ama anti-scalants dosing system, de-chlorination system dosing, system-ka qalliinka loo yaqaan' de-chlorination dosing ', qeybta osmosis-ka oo leh xuubyo semi-permeable ah, iyo sterilizer UV ama chlorination-ka oo loo daaweeyo boostada. Mashiinadan 'RO' waxay adeegsadaan tikniyoolajiyadda 'osmosis reverse' iyaga oo ku sii gudbinaya biyaha quudinta iyada oo loo sii marinayo shey-bareeye fara badan si loo soo saaro walxaha ka weyn 10-micron. Kadibna biyaha waxaa lagu duraa kiimiko anti-scalants ah si loo xakameeyo qallafsanaanta qalalan ee sababi karta waxyeelada xuubka mashiinka RO. Ikhtiyaarradan ku-meel-gaadhka ahi waxay leeyihiin awoodda ka-qaadista adkaanta, koloriinta, urta, midabka, birta, iyo baaruudda. Biyaha ayaa markaa ku sii soconaya qaybta osmosis-ka halka matoorka cadaadiska sare saaraya cadaadis aad u daran xalka aadka u urursan, kala soocaya milixda haray, macdanta, iyo nijaasta ay miiraha hore u qaban karin. Biyo macaan, oo la cabi karo ayaa ka soo baxa dhamaadka cadaadiska hoose ee xuubka halka cusbada, macdanta, iyo nijaasta kale lagu shubo godka dhinaca kale. Ugu dambeyntiina, biyaha waxaa la mariyaa aaladda jeermiska UV (ama chlorination post) si loo dilo wixii bakteeriya iyo jeermis ah ee weli ku jira biyaha.
Tilmaamaha Iibsashada Nidaamka Osmosis-ka ee Warshadaha
Si loo doorto badeecada saxda ah ee RO, macluumaadka soo socda waa in la bixiyaa:
Heerka duulimaadka (GPD, m3 / maalin, iwm.)
2. TDS water TDS iyo falanqaynta biyaha: macluumaadkani waa muhiim si looga hortago xuubabka inay wasakhoobaan, sidoo kale waxay naga caawinayaan xulashada daaweynta saxda ah.
3.Iron iyo manganese waa in laga saaraa kahor intaan biyuhu gaarin qeybta osmosis
4.TSS waa in laga saaraa kahor intaadan galin nidaamka Warshadaha RO
5.SDI waa inuu kayaryahay 3
6. Biyaha waa inay ahaadaan kuwo ka caagan saliida iyo dufanka
7.Khlorine waa in laga saaraa
8 danab la heli karo, wajiga, iyo inta jeer (208, 460, 380, 415V)
9.Qiyaasaha aagga la saadaaliyay ee Nidaamka RO-ga ee ROOM lagu rakibi doono
Hore: ICE Nidaamka Sifeynta Cufan ee ICE ee Daaweynta Biyaha Wareegga Taawarrada
Xiga: ICE Nidaamka Jilcadaha Biyaha Warshadaha ee Qaboojinta Tower Source Water
Qalabka Dib-u-soo-celinta Osmosis-ka
Warshadaha biyaha RO filter
nidaamka nadiifinta biyaha warshadaha RO
Nidaamka daaweynta biyaha ee warshadaha RO
Qalabka RO ee daaweynta biyaha warshadaha
Nidaamka RO ee nidaamka qaboojinta biyaha
Sifeeyaha biyaha RO ee munaaradda qaboojinta
Daaweynta biyaha RO ee habka qaboojinta
ICE MBR Xuubka Module of Warshadaha Wastewate ...